के भनेछन् प्रचण्डले ? | BIVAS
← “भारतीय माओवादीहरु विस्तार हुंदै”
नगर विकास समिती भालुवाङ प्रकरणको वास्तविकता →
के भनेछन् प्रचण्डले ?
-नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन समापन समारोहमा एकिकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा व्यक्त मन्तव्य ।
हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै युगान्तकारी र परिवर्तनको क्षणमा छौं । प्रत्येक महान् क्रान्तिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको थुप्रै उतारचढाव र घुम्ती मोडहरू आउंछन् । हामी त्यस्तै घुम्ती मोडहरूबाट अगाडि बढीरहेका छौं । सामान्यतया क्रान्तिको सफलता नजिक पुग्दै जांदा प्रतिक्रान्ति पनि निकै चर्कोसंग आउने गर्छ । त्यही क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको निकै ठूलो टक्करबाट हामी अगाडि बढीरहेका छौं । नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्षबाट जुन उपलब्धि हासिल गर्‍यो, ती निकै दुरगामी र ऐतिहासिक महत्वका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचन, दुईसय चालिस वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्र र दुई हजार वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य आफैमा नेपाली इतिहासका धेरै परसम्म जाने युगान्तकारी उपलब्धिहरू हुन् । यी उपलब्धिहरू हांसिल गर्नका निम्ति नेपाली जनताका श्रेष्ठतम् १०औं हजार छोराछोरीले बलिदान गरे । हजारौं बेपत्ता र घाइते भए, लाखौंलाख जनताले निकै त्याग तपस्या गरे । अहिले फेरि ती ऐतिहासिक उपलब्धि र परिवर्तनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिले टाउको उठाएको छ । परिवर्तनको धाराप्रवाहलाई रोक्ने एउटा ठूलो प्रयास निकै अगाडि आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यो षड्यन्त्र त्यतिबेला गम्भीररूपले अगाडि आयो, जतिबेला संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम यो देशका सामन्त, दलाल, सबै प्रतिक्रियावादीहरूले सोचेकोभन्दा धेरै भिन्न रह्यो । जतिबेला नेपाली जनताले आफ्नो फैसला परिवर्तनको, क्रान्ति र क्रान्तिकारी पार्टीको पक्षमा दियो, त्यतिबेलादेखि नै परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्ने षड्यन्त्र हुन थालेको हो ।
हाम्रो संविधान सभा २१औं शताब्दीमा सबैभन्दा समावेशी, समानुपातिक नौलो खालको बन्यो । जतिबेला संविधान सभामा नेपाली जनताका सबै तप्काको प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुश्लिमदेखि हरूवाचरुवा सुकुम्बासीहरूको अद्भूत प्रतिनिधित्वमा आजको दुनियांमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी खालको भयो, त्यतिबेलादेखि नै षड्यन्त्र शुरु भयो । यो देशका सामन्त, दलाल, नोकरशाहहरू संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टीलाई जनताले बहुमत दिनेछन् भन्ने सपनामा पनि देखेका थिएनन् । तर, नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरेर संविधान सभालाई यति धेरै समानुपातिक र समावेशी बनाइदियो । त्यसकारण त्यही विन्दुबाट षड्यन्त्र सुरु भयो ।
नेपाली समाजमा अहिलेसम्म राज्यद्वारा उत्पीडित जनतामाथि जो अन्याय अत्याचार भएको छ त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले संविधान सभामा जसलाई अगाडि ल्यायो, ठीक त्यो परिवर्तन, प्रगति, शान्ति र संविधानका विरुद्ध षड्यन्त्र भयो । त्यसैले हामी नयां तरिकाले यो लडाइं लड्दै छौं । मैले राजिनामा दिइसकेपछि यिनले सोचेका थिए कि माओवादीले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो छोड्छ, क्यान्टोन्मेन्टबाट सेना निकाल्छ र त्यही बहाना फेरि युद्ध थोपर्न पाइनेछ तर त्यसको जवाफमा शुरुमा हाम्रो पार्टीले खुला मञ्चमा विशाल जनसभाको आयोजना गर्‍यो । त्यहां तीनलाख जनताको उपस्थिति भयो । शान्तिकासाथ संयमित तरिकाले हामीले नेपालमा नागरिक सर्वोच्चताको हनन् हुंदैछ, शान्ति र सविधानसभाका विरुद्ध षड्यन्त्र हुंदैछ भन्यौं । त्यसपछि हामीलाई उत्तेजित पार्ने र नेपाली जनताको आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात गर्ने षड्यन्त्र जारी नै रह्यो । हामीले सदनभित्र र बाहिर जनताको बीचमा भनिराख्यौं, हामी माओवादीहरू नेपाली जनताले बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा जिम्मेवारी दिएकोले हामी यो देशका प्रतिक्रान्तिकारी, दलाल, नोकरशाहले भनेकोजस्तो लडाईं लड्दैनौं नयां ढङ्गले लड्छौं । जनताले हामीलाई शान्ति, संविधान र नयां नेपालको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले हामी भाग्दैनौं । भाग्नैपर्छ भने हामी होइन ती प्रतिक्रान्तिकारीहरू भाग्नुपर्छ ।
हामीले नयां ढङ्गको लडाइं लड्न चाह्यौं र नयां ढङ्गको कार्यक्रम बनायौं । हामीले बनाएको घेराउ र बहिस्कारको कार्यक्रम उनीहरूले चाहेकोभन्दा नितान्त बेग्लैरूपमा सम्पन्न गर्‍यौं । देशभर घेराउ लगायतका कार्यक्रमले यो सरकारलाई जनताले हृदयदेखि कति घृणा गर्छन् भन्ने कुरा देखाइसकेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म जताततै यो सरकारप्रति जनताको हृदयमा अपार घृणा छ । यो मजाक, नौटङ्की जुन देखाइंदैछ नेपाली जनतालाई रत्तिभर सह्य छैन । एकछिन पनि जनता सहन तयार छैन । हामीले पहिलो चरणमा यो कुरा सावित गर्यौं । दोश्रो चरणको यो आन्दोलन जनताको संयुक्त एकिकृत आन्दोलनको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्यौं । मलाई अहिले तपाईहरूको अगाडि उभिएर केही कुरा भन्दै गर्दा गर्वको महसुस भएको छ । सांच्चै हामीले १५ गतेदेखि २७ गतेसम्मको घटनाक्रम हेर्यौं भने यो आन्दोलन नयां भएको छ । मैले अहिले भर्खरै के सुनें भने कांगेस्र र एमालेका एकथरि नेताहरू दिउंसो बसेर माओवादीले बर्बादै पार्‍यो, जनता पनि विशाल उतार्‍यो । नाचगान पनि गर्‍यो, बाजागाजा, नाराबाजी पनि भयो, यो अर्कै आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा कविहरू आए कविता पढे । कलाकारहरू आए कलाको प्रदर्शन गरे । सांस्कृतिक झांकीहरू आए, प्रदर्शन गरे । योद्धाहरू आए अनुभवको प्रदर्शन गरे । मुठ्ठी उठाए, नाराबाजी गरे । यो आन्दोलन सांच्चै नयां खालको आन्दोलन भयो भन्दै उनीहरूको सातो गयो रे ! अब त माओवादीलाई आरोप लगाउने ठाउं नै पाइएन भने रे ! हिजो मलाई कैयौं कुटनीतिज्ञहरूले बधाई दिए, लाखौं जनतालाई उतारेर पनि यति संयमित, अनुशासित, नाचगान, गीत कविता सबै सबैसहितको आन्दोलन हामीले कहीं देखेनौं ।
हामीले के सिकेका छौं भने, प्रतिक्रियावादी जालीफटाहाहरूको विरुद्ध ‘टिट फर ट्याट’ नै गर्नुपर्दछ । उनीहरूले युद्ध खोजे हामी शान्तिको निम्ति लड्छौं । त्यसकारण फटाहालाई जे चाहिन्छ त्यसैको विरुद्ध हामी लड्छौं । अहिले फटाहाहरूलाई युद्ध चाहिएको छ । माओवादी युद्धमा गइदिए, फेरि मज्जाले लुटेर खान पाइन्थ्यो भन्ने तिनीहरूलाई लागेको छ । हामीले तिनलाई छुट दिनेवाला छैनौं । त्यसकारण अहिले हामीले नितान्त नयां सकारात्मक ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेका छौं । कतिपयले माओवादीले के लिएर आयो, यो जनआन्दोलन हो कि जनक्रान्ति हो ? यो त सांस्कृतिक क्रान्ति हो कि के हो ? हो यो सांस्कृतिक क्रान्ति पनि हो । हिजो तपाई हामीले देख्यौं, थुप्रै सिने कलाकारहरू आएर तपाई हाम्रो अगाडि लालसलाम भनेर राष्ट्रको निम्ति लड्न तयार छौं भने । यसले पनि के देखाउंछ भने यो सांच्चै नयां खालको आन्दोलन हो ।
अहिले सिंहदरबारमा बस्नेहरू जो नेपाली जनताको इच्छा, संविधानसभा र अन्तरिम संविधानअनुसार बसेका छैनन्, तिनीहरू संविधान मिचेर, नेपाली जनताको भावना र आकाङ्क्षालाई चिरेर, मुटुमा झिर हानेर बसेका छन् । तिनीहरू रिमोट कन्ट्रोलद्वारा त्यहां बसेका छन् । आकाशवाणीबाट सञ्चालित छन्, नेपाली जनताद्वारा होइनन् । त्यसकारण हामी तिनले जे सोचेका छन्, त्यसभन्दा विपरीत जान चाहन्छौं । हामीलाई यतिबेला नेपाली जनताको शान्तिको लडाई लड्नु छ । जसले युद्धद्वारा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्‍यो, शान्तिको लागि पहल गर्‍यो, त्यही राजनीतिक संस्थालाई मात्रै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीको महसुस हुन्छ । नेपालमा एकिकृत नेकपा (माओवादी)ले शान्तिको वातावरण क्रान्तिबाट पैदा गर्‍यो, संविधानसभा क्रान्ति र बलिदानकै बीचबाट पैदा गर्‍यो, त्यसैले हामीलाई शान्ति र संविधानप्रति भित्रैदेखि माया छ । कतिपय मानिसहरू भन्ने गर्छन् हाम्रो आन्दोलनले संविधान बनाउने प्रक्रियालाई ढिलो पार्‍यो । यसो भन्दा हामीलाई अनौठो र हांसो उठ्छ । के यो सांचो कुरा हो ? कदापि होइन । पटक-पटक सङ्कटकाल लगाएर नेपाली जनतालाई गोलीले भुट्नेहरू शान्तिका पक्षपाती ? संविधानसभाको विरुद्ध लड्नेहरू शान्तिको पक्षपाती ? माओवादी जसले सांचो अर्थमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको निमित्त आवाज उठाउंदै आयो, ऊ चाहि शान्तिविरोधी ? यो दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । नेपाली जनता, बालबच्चा र सबैले बुझिसकेका छन् ।
अहिले संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र हुंदैछ । संविधानसभा विघटन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको एमालेका नेताले बाहिरै भन्नुभयो । हामीलाई थाहा छ यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि अन्तिम रूपमा संविधानसभामा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएं । अहिले परिस्थिति बनाइदैछ नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध । अन्ततः यसभित्र संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र निहित छ । ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने र फेरि गृहयुद्ध मच्चाएर अर्बौ सम्पत्ति लुट्ने मुठ्ठभिर नोकरशाह, सामन्त, दलालहरूको षड्यन्त्र यसभित्र छ । अहिले घटनाक्रमको पांच छ महिनामा आइपुग्दा प्रमाणित भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका घोर दक्षिणपन्थी नेताहरू संविधान नबने पनि नबनोस् भन्दैछन् । शान्तिप्रक्रिया सफल नहोस् भन्दैछन् । त्यसकारण उनीहरूको सहमति बनाउनेतर्फ कुनै तत्परता छैन । उनीहरूको तत्परता भनेको संविधानसभा विघटन गर्नेतिरै छ । यो संविधानसभाबाट नयां संविधान बन्यो भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सम्पूर्ण किसान मजदुरको पक्षमा बन्छ । सामन्त, दलाल, नोकरशाहको पक्षमा यो संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन । त्यसैले यो देशका सबै सामन्त, दलाल, नोकरशाहहरू हिजोदेखि राज गरेका मुठ्ठीभर लुटेराहरूले संविधानसभा विघटन गर्न चाहेका छन् । कतिपयले कहिलेकाहीं भन्छन्, माओवादीको यो आन्दोलनले झन् संविधान बनाउने कुरालाई बिथोलेको हो कि ? म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो लडाई हामीले अहिले जितेनौं भने संविधानसभा विघटन हुनेवाला छ ।
संविधानसभाको रक्षा र शान्तिको लागि यो लडाइं हामीले जित्नैपर्छ । हाम्रो यो आन्दोलन तबसम्म रोकिंदैन, जबसम्म नागरिक सर्वोच्चताको हत्या गर्ने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चिदैन । हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालतमा यो विषयमा सम्झौता गर्ने छैन । राष्ट्रपतिको कदम विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिन्तीपत्र हालेर प्रधानमन्त्री बनेजस्तै अहिले राष्ट्रपतिलाई राजा बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने जो नौटंकी प्रदर्शन भएको छ, यसलाई धरासायी नपारेसम्म आन्दोलन रोकिने छैन । अहिले सिंहदरबारमा बस्ने, संविधानसभा विघटन गर्ने सपना देख्ने र माओवादीलाई दबाउने सपना देख्नेहरूलाई हामी गम्भीरता र पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छौं अझै पनि समय छ तिमीहरूले बुझ्ने कोसिस गर । जतिबेला म प्रधानमन्त्री थिएं र मैले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको बैठकमा पटकपटक भन्ने गरेको थिएं । सेनालाई नागरिक सरकारको मातहतमा ल्याइनुपर्छ । हामीले ०१७, ०३६/०३७ र ०४६ सालबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनको शिक्षालाई हामीले बिर्सनु हुंदैन । त्यसकारण हामीले परिर्वतन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न जरुरी छ ।
सेनाको बलमा सत्तामा आउने सपना कसैले देख्यो भने त्यसले नेपाली जनताको चाहना र शहिदको चाहनामाथि ठूलो गद्दारीबाहेक केही हुने छैन भनेको थिएं । तर बिडम्बना ! अहिले सिंहदबारभित्र बसेका साथीहरू जनताले पुर्‍याएको जस्तो भ्रम छरिरहेका छन् । यद्यपि नेपाली जनतालाई राम्रोसंग थाहा छ, तिनीहरूलाई त्यहां कसले पुर्‍याएको हो । उनीहरू त्यहां जानु नेपाली जनताको बेइज्जति, शहिदको रगतको अपमानबाहेक केही पनि होइन । उनीहरू त्यहां बस्नु नेपालको परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई उल्टो दिशातर्फ घुमाउने षड्यन्त्रबाहेक केही पनि होइन । म नौ महिने प्रधानमन्त्री हुंदा यो कुरा राम्रोसंग बुझे कि यी पुराना पार्टीहरू, पुराना नेताहरूको सरकार बनाउने र भड्काउने खेल कसरी चल्दोरहेछ र अहिले पनि यो खेल कहांबाट चलिरहेको छ । नागरिक सर्वोच्चता र राष्टिय्र स्वाधीनताको विषय धेरै गम्भीर छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको हत्या भएको छ । त्यसकारण हामीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहिएको छ । यो लडाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाई हो । हामीले यो लडाई जित्नैपर्छ । यसपालि यो लडाई जितिएन भने नेपाल धेरै ठुलो दुर्घटनामा पर्नेछ । हामीले नागरिक सर्वोच्चता भन्दा कतिपयले बडो सङ्कीर्णतामा बुझ्ने गरे । मानौं त्यो माओवादीले बुझेका छैनन्, सङ्कटकाल लगाउनेहरूले बुझेका छन् । नेपाली जनतामाथि दमन अत्याचार गर्नेहरूले बुझेका छन् । नागरिक सर्वोच्चता भनेर जस्तो प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन । नागरिक सर्वोच्चता भनेको नेपालमा सामन्तवाद, विदेशी प्रतिक्रियावादद्वारा सयौं वर्षदेखि शोषण उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गर्नु हो । त्यसकारण सावधान महिला दिदीबहिनीहरू, तपाईंहरू अहिले जाग्नुभएन भने फेरि सामन्ती शोषण र उत्पीडनको जञ्जालमा फस्ने खतरा छ । सावधान दलित जनसमुदायहरू, हामी एकचोटी एकजुट हुन सकेनौं भने यी यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारीहरूले फेरि दलितहरूलाई पहिलेजस्तै शोषण दमन, उत्पीडन र भेदभावको जांतोमा पिस्नेछन् । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सावधान, किनकि हामी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पक्षमा लड्यौं, हामीले सङ्घीयता मार्फत् राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन चाहेका छौं । हामीले भन्यौं, यो देशलाई बलियो बनाउने हो भने उत्पीडित जनजातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै पर्छ, अधिकार सम्पन्न जनताले मात्रै राष्ट्रलाई बचाउन सक्छन् । अहिले सङ्घीयताको विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसकारण सावधान आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, सबै मधेसी, मुश्लिम, तराईदेखि हिमालसम्मका सबै सबै जनसमुदायहरु, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चताको यो लडाइं हामीले जित्नु छ, हामीले जित्नैपर्छ । त्यसकारण माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता कायम नहुंदै यो आन्दोलन बीचैमा छोड्छ भन्ने भ्रम छ भने हटाइदिऔं । कुनै पनि हालतमा नागरिक सर्वोच्चतामा सम्झौता हुने छैन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता, बाह्य रूपमा हुने हस्तक्षेप र दबाबबाट नेपाल राष्ट्रलाई सांच्चै मुक्त गर्न स्वाभिमान नेपाल निर्माण नहुंदासम्म सम्झौता गरिने छैन ।
यदि हाम्रो पार्टीले सम्झौता गर्थ्यो भने मैले सरकारको नेतृत्व छोड्न जरुरी पनि थिएन । राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा सम्झौता गर्न नचाहेकै कारणले हामी तपाईंहरूको अगाडि आयौं । त्यसकारण हामी यी आधारभूत पक्षमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी जुनसुकै क्षेत्रको समुदाय भएपनि नेपाली हौं । हामीलाई नेपाल राष्ट्रको हित सर्वोपरी छ । हामीलाई नेपाल राष्ट्रको हितलाई कमजोर पार्ने गरी सत्ता र कुर्सीको पटक्कै लोभ छैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने गरी हामी कसैसंग कुनैखाले सम्झौता गर्न सक्दैनौं । हामीले नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, नेपाली जनताको अधिकार, नेपाल राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राख्दै आएका छौं । त्यसको अर्थ हामी कुनै देशको विरुद्धमा लड्छौं भन्ने होइन । हामी हाम्रो छिमेकीहरूसंग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं । चीन, भारतसंग समदुरीको सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं । तर, इतिहासमा भएका असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी चाहन्छौं । इतिहासका असमान सन्धिसम्झौता रहंदासम्म नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र रहन सक्दैन । त्यसकारण हामी इतिहासको मुल्याङ्कन र समीक्षा चाहन्छौं । अहिलेको २१औं शताब्दीका नेपाली जनताको नयां चेतना अनुसारको नयां सहमति, सन्धि र सम्झौता चाहन्छौं । राणा शासनको पारिवारिक सन्धि सम्झौता, राजतन्त्र बेलाका सन्धि सम्झौता हामीलाई मान्य छैनन् । हामी नेपाली जनता स्वतन्त्र भएपछि, गणतन्त्र आएपछिको सन्धि सम्झौता चाहन्छौं । हामी ती नयां सन्धि सम्झौता मार्फत् नेपाल राष्ट्रलाई सांचो अर्थमा स्वाधिन र गौरवान्वित तुल्याउन चाहन्छौं । हामी कसैसंग घुंडा टेकेर नेपालको राम्रो भलो हुन्छ भन्ने ठान्दैनौं । नेपालमा अहिले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्नुको तात्पर्य यही स्वाधिनतालाई स्थापित बनाउनु हो ।
अहिले हाम्रो जुन शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन भयो, यसले प्रतिक्रान्तिकारीहरूको सातो गइसकेको छ । अझ सातो जाओस् तर हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन । शान्ति प्रकृया भांड्ने, संविधानसभा विघटन गर्नेहरूका विरुद्ध सङ्घर्षका जुनसुकै तहसम्म जान तयार छौं तर तिनीहरूसंग यो ऐतिहासिक मुद्दामा कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं । मैले हिजो एकजनासंग भने- नेपाली जनताले बनाएको, नेपाल राष्ट्रले चाहेको प्रधानमन्त्री र सरकार भए यति ठूलो जनताको सागर देखिसकेपछि, देशैभरि जनतामा यति ठूलो उभार देखेपछि जनताको अगाडि आएर ‘ल जनता हो मैले राजिनामा दिएं’ भन्थे । तर, नेपाली जनताले नबनाएकाहरू त रिमोर्ट उताबाट नथिचेसम्म या नेपाली जनताले नगलहत्याएसम्म छोड्नेवाला छैनन् ।
हामी यो शान्ति प्रकृया सफल होस्, संविधान निर्माण होस्, अझै पनि त्यसको पक्षमा सबै पार्टीसंग सहमति होस् भन्न चाहन्छौं र दोस्रो चरणको आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा माओवादीको अपार समर्थन सिद्ध गरेर समापन गर्दैछौं । यो आन्दोलनले ऐतिहासिक र भव्यरूपमा विश्वव्यापी सन्देश दिइसकेको छ । हामी यो समापन समारोहमार्फत् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई के भन्न चाहन्छौं भने फेरि एकचोटी इतिहासबाट शिक्षा लिनुहोस्, नेपाली जनताको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, यदि त्यसो हुंदैन भने हाम्रो तेस्रो चरणको आन्दोलन हुन्छ । त्यो आन्दोलन यो भन्दा आक्रामक, व्यापक र अझ नयांखाले हुनेछ । हामीलाई विश्वास छ, त्यो आन्दोलनले उनीहरूको यो धृष्टता र दुष्टतालाई सम्पूर्ण रुपले समाप्त पार्नेछ । त्यसकारण आगामी मङ्सिर ५ गतेसम्मको अल्टिमेटम म यहां हाम्रो पार्टी केन्द्रको तर्फबाट घोषणा गर्न चाहन्छु । मङ्सिर ५ गतेसम्म नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने कुरामा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र मन्त्रीहरूले ध्यान दिएनन् भने मङ्सिर ५ पछि अर्को नयां राजनीतिक आन्दोलन सुरु हुनेछ । अर्को नयां अभियान सुरु हुनेछ । त्यो सिंहदबारमा मात्रै होइन, देशव्यापी, जिल्ला-जिल्लामा हुनेछ त्यो अर्को नयां उचाईंमा हुने आन्दोलनलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
Posted by CHINTAN on नोभेम्बर 15, 2009 in SPECIAL
One response to “के भनेछन् प्रचण्डले ?”
नोभेम्बर 16, 2009 at 10:20 बिहान
yi khokai matra hun soaltee !